News List - अमेरिका विशेष
वासिङ्टन डिसी । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले पुनःनिर्माणको पहिलो प्राथमिकता निजी घरको निर्माण त्यसपछि बाटो र पुल अनि स्कुल र स्वास्थ्य चौकी, पर्यटकीय स्थानको हुने बताएका छन्। नेपालमा गएको प्रलयकारी भूकम्पको पहिलो वर्ष वासिङ्टन ...
एजेन्सी । अमेरिकाले पहिलोपटक मुद्रामा महिलाको तस्बिर अंकित गर्ने भएको छ। २० डलरको नोटमा दासप्रथा विरोधी अभियन्ता हरियट टबम्यानको तस्बिर अंकित गर्ने निर्णय बिहीबार अमेरिकाको वित्तीय विभागले सार्वजनिक गरेको छ। टबम्यान मुद्रामा अंकित हुने पहिलो दास ...
न्युयोर्क । प्रवासी नेपाली मञ्च म्यासाचुसेट्स राज्य समितिको पहिलो अधिवेशनले नवराज दाहालको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृन्व चयन गरेको छ । मञ्चको यो पन्ध्रौं राज्य समिति हो । अधिवेशनले उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः निर्मल पौड्याल, भीमप्रसाद ओली र जालप्रसाद ...
अमेरिका । अमेरिकाको एक ऎतिहासिक युसी डेभिस पिकनिक (परेड) डे २०१६ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै शाक्यमुनि गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भन्ने सन्देशका साथ नेपाली मौलिक कला सस्कृतिको झाँकी प्रदर्शन गरेर विश्व सामू नेपाल र नेपालीको पहिचान गराए । १९०९ देखि ...
वाशिंगटन डिसी । गीति नाटक ‘मालती मंगले’ का चर्चित नायक हरीबहादुर थापालाई डिसीमा सम्मान गरिने भएको छ l डिसी महानगर क्षेत्रमा सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएको अमेरिका नेपाल सहयोगी समाजको पहलमा नेपाली नाटकका धरोहर, वरिष्ठ कलाकार एवं प्राज्ञ थापालाई सम्मान गर्ने ...
अमेरिका । अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकारहरुको संस्था नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ नेजाको आउँदो महिना हुन लागेको अधिवेशनको चुनावी सरगर्मी बढेको छ । आउँदो मे महिनाको ७ र ८ तारिक हलिउड शहर लसएन्जलसमा हुन लागेको अधिवेशनका लागि पत्रकारहरु चुनावी ...
न्युयोर्क । प्रवासी नेपाली मञ्च म्यासाचुसेट्स राज्य समितिको पहिलो अधिवेशनले नवराज दाहालको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृन्व चयन गरेको छ । मञ्चको यो पन्ध्रौं राज्य समिति हो । अधिवेशनले उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः निर्मल पौड्याल, भीमप्रसाद ओली र ...
अमेरिका । एनआरएन अमेरिकाले ग़ैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन आईसिसी) प्रमुख संरक्षक जीवा लामिछानेको न्यूयोर्कमा स्वागत गरेकोछ। न्युयोर्कमा एनआरएनएनसीसी युएसएको पहलमा भएको स्वागत तथा अन्तक्रिर्यालाई सम्बोधन गर्दै संरक्षक लामिछानेले एनआरएनको ...
वाशिंगटन डिसी । चिकित्सा विज्ञानका विद्यार्थी राजन थपलिया विश्व प्रसिद्ध पत्रिका हफिंगटन पोस्टमा लेखकको रुपमा प्रवेश गरेका छन् l धादिङ घर भएका थपलिया लामो समयदेखि अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्दै आएका छन् । काठमाडौंबाट प्रवेशिका परिक्षा उत्तिर्ण गरेपछि ...
वाशिंगटन डिसी । वर्ल्ड बिजनेशस म्यानेजमेन्ट एण्ड कन्सल्ट्याण्ट (डब्लुबिएमसी)एलएलसी को आयोजनामा आगामि सेप्टेम्बर ३० देखि अक्टुबर २ तारिख सम्म न्यूयोर्क मा नेपाली उत्पादनको प्रबर्धनका लागि ३ दिने व्यापार मेला हुने भएको छ । डब्लुबिएमसी मेरील्याण्ड ...
न्युयोर्क । नेपाली कांग्रेसको अमेरिकास्थित भातृ संगठन नेपाली जनसम्पर्क समितिभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ । समितिका निर्वाचित अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु एक-अर्कालाई निलम्बन गर्ने तहमा उत्रिएका छन् । गत साता केही पदाधिकारीको उपस्थितिमा बसेको आकस्मिक ...
बुद्ध धर्मको मान्छे पप स्टारले चिनिएँः आनी छोइङ
वाशिंगटन डिसी । गायिका तथा युनिसेफकी सदभावना दूत आनी छोइङ डोल्माले वाशिंगटन डिसीस्थित लिस्नर सभा मण्डपमा बेजोड प्रस्तुति गरेकी छिन् । गोर्खाली फाउन्डेसनको सहयोगमा भिन्तुना इन्टरनेसनलको मुख्य आयोजनामा गरेको कार्यक्रममा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा. ...
न्यूयोर्क । संसारकै ब्यापारिक राजधानि मानिने न्यूयोर्कको म्यानहटन शहरमा पहिलो पटक नेपाल झल्कने परेड हुने भएको छ । आगामी गणतन्त्र दिवस अर्थात् मे २२ को दिन पारेर संसारका सयौं देशका लाखौं मानिसहरुको चहल पहल हुने म्यानहटनमा नेपाल झल्कने परेड हुने भएको हो ...
बाल्टिमोरमा वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनको दोश्रो अधिवेसन सुरू
बाल्टिमोर । अमेरिकाको म्यारिल्याण्ड राज्यको बाल्टिमोरमा वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसनको दोश्रो अधिवेसन सुरू भएको छ । कार्यक्रममा नेपालसहित क्यानडा, रसिया, बेल्जियम, जापान, कतार, बेलायत, पोर्चुगल, नेदरल्याण्ड, भारत, अस्ट्रेलिया लगायत ११ देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ...
अमेरिकामा बस्ने नेपालीले धुमधामसँग मनाए होली
पेन्सलभेनिया । अमेरिकामा पनि नेपालीहरुले धुमधामका साथ होली मनाएका छन् । अमेरिकाको पेन्सलभेनियास्थित हेरिसवर्गमा बस्ने नेपालीहरुले धुमधामका साथ होली मनाएका हुन् । हेरिसवर्गमा रहेका नेपाली युवाहरुको पहलमा होली मनाइएको हो । प्रवासमा रहेर पनि नेपालका ...
अर्जेन्टिनामा यसरी नाचे ओबामा दम्पति (भिडियो)
ब्युनआयर्स । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र प्रथम महिला मिसेल ओबामाले अर्जेन्टिना भ्रमणका क्रममा ट्यांगो नाच नाचेका छन्। बुधबार ब्युनआयर्सको क्रिचनर कल्चलर सेन्टरमा आयोजित डिनर पार्टीमा ओबामा दम्पति अर्जेन्टिनाको मौलिक नाच नाचेका हुन्। ...
अमेरिकाको टेक्ससमा भएको सवारी दुर्घटनामा नेपाली युवाको निधन
टेक्सस । यहाँस्थित एक कलेजमा अध्ययनरत नेपाली किशोर रुसल श्रेष्ठको गाडी दुर्घटनामा निधन भएको छ । शनिवार राती करीब १०:३० बजे स्थानीय राजमार्ग नजिक २१ वर्षीय रुसल आफैंले चलाएको गाडी दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमा नै उनको निधन भएको प्रहरीले आफुहरुलाई जानकारी गराएको ...
न्युयोर्कमा ठकुरीलाई कास्य पदक
वाशिंगटन डिसी । आज मार्च २० तारिख आइतबार न्युयोर्कको फ्लसिंगको सेराटन लागर्डिया इस्ट होटलमा भएको कराते खेलमा डिसीका उज्ज्वल ठकुरीले कास्य पदक हात पारेका छन् । न्युयोर्क राज्यको फ्लसिंगमा भएको कराते युएसए मार्शल आर्ट्स हल अफ फेम ३५ बर्ष देखि ४५ बर्ष को ...
अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकाको टोली सम्मानित
वाशिंगटन डिसी । संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय तथा सामुदायिक सेवा संस्था मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयबाट राष्ट्रपतीय स्वयंसेवा पदक द्वारा ब्लड डोनर्स अफ अमेरिकाका अध्यक्ष डा. लीला बहादुर कार्की, न्युयोर्कका संयोजक निमा शेर्पा, सहसचिव मनिष शाक्य तथा टेक्सास ...
दुई जना छात्र छात्रालाई ‘नेपाली घर’को छात्रबृति
कोलोराडो । कोलोराडोमा सक्रिय सामाजीक संस्था ‘नेपाली घर’ले हरेक बर्ष उच्च माध्यामिक शिक्षा उत्तिर्ण गरेका दुई जना छात्र छात्रालाई एक एक हजार डलर छात्रबृति दिने निर्णय गरेको छ । गत शुक्रबार सम्पन्न संस्थाको बैठकले कोलोराडोमा बसोबास गर्ने नेपाली ...
Results 85 - You are at page 1